सावित्राद्वारा अनुको कीर्तिमान बराबरी! | Hamro Khelkud
सावित्राद्वारा अनुको कीर्तिमान बराबरी!
नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमानको बराबरी गरेकी छिन् । नादेझ्दा कपको फाइनलमा उज्बेकिस्तानविरुद्ध २ गोल गर्दै सावित्राले अनुको ३५ गोलको कीर्तिमान बराबरी गरेकी हुन् ।
सावित्राले राष्ट्रिय टोलीका लागि ३७ खेल खेल्दै ३५ गोल गरेकी छिन् । सन् २०१४ को साफ च्याम्पियनसिपमा भुटानविरुद्ध खेल्दै राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेकी सावित्राले त्यसपछि लगातार राष्ट्रिय टोलीका लागि गोल गर्दै आएकी छिन् । डेब्यु खेलमा नै गोल गर्दै सानदार सुरुवात गरेकी सावित्राले त्यसपछि अर्को गोल गर्न ७ खेल कुर्नुपर्यो ।
सन् २०१६ को दक्षिण एसियाली खेलकुदमा श्रीलंकाविरुद्ध २ गोल गरेकी सावित्राले मलेसियाविरुद्ध नेपालमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा विजयी गोल गरेकी थिइन् । त्यसपछि भारतको सिलिगुडीमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा उनले ४ खेलमा १२ गोल गरेकी थिइन् । त्यस प्रतियोगितामा भुटानविरुद्ध ६ र माल्दिभ्सविरुद्ध ५ गोल गरेपछि उनी चर्चाको शिखरमा पुगेकी थिइन् ।
मलेसियाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा गोल गरेपछि सावित्राले ओलम्पिक छनोट अन्तर्गत म्यानमारलाई बराबरीमा रोक्दा पनि गोल गरिन् । भारतमा भएको हिरो गोल्डकपमा भारत र इरानविरुद्ध जितमा २-२ गोल गरेकी उनले नेपालमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा सबै ४ खेलमा १-१ गोल गर्न सफल भइन् । त्यसपछि ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणमा इन्डोनेसियाविरुद्ध २-१ को जितमा दुवै गोल उनको नाममा रहयो ।
किर्गीस्तानमा जारी नादेझ्दा कपको पहिलो खेलमा आयोजकविरुद्ध ४ गोल गर्दै उनले गोलसंख्या ३२ पुर्याइन् । त्यसपछि समूहको अन्तिम खेलमा ताजिकिस्तानविरुद्ध विजयी गोल गरेकी सावित्राले फाइनलमा २ गोल गरेकी हुन् ।